Nezvedu - Huizhou Vivibetter Packaging Co., Ltd.
HuiZhou VIVIBetter kurongedza Co., Ltd.
HuiZhou VIVIBetter kavha Co., Ltd. rakaumbwa muna 2015 pamwe mari 1 miriyoni Currencykuva. Kune vashandi vanopfuura makumi mashanu, kusanganisira vashanu maere fekitori ane 1000 mativi emamirimita, ayo akakosha pagore kukosha kwekugadzira akasvika 5 miilion yuan. Tinogona kupa sevhisi kubva dhizaini, kudhinda kune post processing.
Zvekusimudzira zvirinani, VIVIBetter ichavandudza uye kugadzirisa zvakaringana kusimbisa kukwikwidza kwayo uye pesvedzero. VIVIBetter inosimbirira pamabatiro ehunhu evashandi vese kutora chikamu, kusimudzira kusimudzira nekuchengetedza kuzvipira kumutengi wese. Tiri kusimbisa ISO9001 Yemhando Yekusimbisa Sisitimu uye ISO14001 Yemamiriro Ekuchengetedza Sisitimu. VIVIBetter yakahwina mukurumbira wakanaka kubva kune vatengi vane sainzi uye inoshanda manejimendi, chigadzirwa chemhando yepamusoro, mutengo unonzwisisika, kubata nguva uye basa rinoshanda, kusanganisira OEM neODM sevhisi.
Zvigadzirwa zvikuru muVIVIBetter zvinosanganisira ese marudzi ePET uye Textile kurongedza, isina mvura bhegi, isina mvura bhegi, isina mvura shangu uye donje magurovhosi .mops .towels uye machira akasiyana ekutenga bhegi uye zvichingodaro. Isu tinogadzira zvigadzirwa zvinoenderana nePDF kana AI kubva kune vatengi kana dhizaini yavo kana zvichidikanwa.
Musika wepasi rose ndiyo yedu huru yehondo munda .yese buisiness kubva kunze kwenyika inogara ne80% yekambani yedu venture.We tinotarisira kupa yakanakisa nhumbi nhumbi kune vatengi vanobva kumativi ese epasi.
Chirevo chedu ndechekuti. "Mutengi ndiye mwari wedu uye mhando dzinoiswa pakutanga. Kufunga kune vatengi chero nguva. Gadzirisa dambudziko pakutanga"